ELaguna Celeste, ePososí
EMzantsi Melika EBolivia Potosí
Idilesi: iBolivia, iAndes, iPur-Lipes iPhondo
Indawo: 230 iihektare
Ukuphakama ngaphezu kweselwandle: 4529 m
Iphondo laseSurpes eliseningizimu yeBolivia liyaziwa ngamanzi alo ayingqayizivele-ilitye ebizwa ngokuba yiLaguna Celeste. Ukuguqulelwa ukusuka kwisiSpanish, igama layo lithetha "i-lagoon ebhakabhaka."
I-Laguna-Celeste ifumaneka kwingingqi ye- volcano eyaziwayo i- Utruska , kwi-altitude ye-4,500 m. Igama alikhethi ngengozi, ngenxa yokuba amanzi aphuma kumanzi ngenxa yexabiso elikhulu lamatye e-sedimentary kuwo. Inomdla kunye nobukhulu belibi. Kwezinye iindawo ubude bayo bufikelela kuma-2.5 km ubude kunye no-1.5 km ububanzi. Ummandla wendawo yamanzi i-2.3 metres square. km, kwaye ubude bomda wonxweme luyi-7 km.
Kubalulekile ukwazi ukuba amanzi avela kumthombo akakulungelanga ukutya kunye nokuhlamba, njengoko ukwakhiwa kwamakhemikhali okomzimba kungalimaza umzimba womntu.
Kwindawo yeLake Laguna-Celeste, kukho iintlobo ezininzi zeentaka, ezi zininzi phakathi kwazo zi-pink flamingos.
Ulwazi olu luncedo
Unokutyelela elwandle ngaliphi na ixesha elifanelekileyo kuwe, kodwa ngokukhethekileyo iLaguna-Celeste enhle kwiimozulu ecacileyo. Yaye ukuba uhambo aluzange lube lunomdla kuphela, kodwa lukhuselekile, qiniseka ukuba uqeshe isikhokelo.
ILaguna Celeste itholakala kwenye yeendawo ezikude zaseBolivia, ezinokufikelela kuphela ngeendiza. Ubude bexesha lokuhamba ukusuka kwikomkhulu liya kuba malunga neeyure ezingama-7. Xa ufika eLa Paz, urenta imoto uze udibanise 22 ° 12'45 "S. w. kunye no-67 ° 06'30 "h. njl njl, okuya kukukhokelela ekujoliswe kuyo.
Isiqithi sesitya saseTshayina
UFicus Benjamin - iimpawu kunye neenkolelo
Amahlaya aseKindergarten: amaqonga angama-35 ale vavanyo kubazali nabantwana!
Cottage ushizi casserole nge recipe
Imyuziyam yoBugcisa boMthonyama boPhambi kweColumbian
URobert De Niro ucinga ukuba unokufumana ubumi baseRussia
Iingubo zemiFashion 2015
Ithempeli laseYasaka Jinja
Ngaba kuyingozi kwiikati?
Ukuguqulwa kwamatye "amatye amanzi"
Indlela yokupheka izilwanyana ekhaya?
Izingubo zoboya zobuncwane phantsi kwe-mink
Ukuhlanjululwa yinyanga ngothando
Imvubelo Evitaly - enhle neyobubi
Indlela yokuqhawula umlumko uyabetha umntwana ngezilwanyana zomntu?
Iholide encinci - indlela yokusebenza ngokusemgangathweni yeyona ndlela?
Nefrotosis of degree 1
Itafile yekhofi kwimihlathi eqinile
I-T-shirts ngokuprintwa - izisombululo zokuqulunqa zangaphambili kuzo zonke izihlandlo
Beeza ngeentambo - iresiphi
Igolide ibeka - amacici kunye nengcongolo
Ikhefu kunye nenyama ehovini - iimbono ezihle kakhulu zokupheka izinto eziphekiweyo